Cudurka HIV-ku sidii shalayto ma aha! Astaamaha iyo daaweynta | Somaliska
Inuu qofku isagoo cudurka hivka qaba uu ku noolaado Iswiidhan aad ayay uga macno duwan tahay sidii shalayto. Wadanka Iswiidhan daawaynta cudurka hivku waxay noqotay wax ku ool, oo hoos ayuu u dhacay heerkii uu fayrisku joogay ilaa uu gaaray eber, oo markaa in cudurka uu qofku sii gudbiyo ama qofkale ku daarto aad ayay u hoosaysaa. Cudurka Hivku maanta ma aha cudur dilaa ah ee waa cudur uu qofku sidayo oo infekshankiisa la daawayn karo. Haddii daawayntiisa la bilaabo wakhti fiican ama wakhti hore wuxuu qofku filayaa ama rajaynayaa inuu noolaado intuu uu caadiyan noolaan lahaa isagoon cudurka hivka ah qabin.
Dad badan ayaa cudurka hivka iyagoo qaba kula nool wadanka Iswiidhan. Inuu qofku jaahil ka yahay in qofka cudurka hivka qabaa uu ku noolaan karo waxay keentaa takoorid. Sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay in aqoonta hivka kor loo qaado. Halkan waxaad ka oggaanaysaa waxyaabo badan oo ku saabsan micnaha in lagu noolaado cudukar hivka maanta. Waxaanu anagu aaminsanahay inaad adiga ka heleyso aqoon badan micnaha ka dambeeya in lagu noolaan karo cudurka hivka Iswiidhan manta.
Hay’adda caafimaadka dadweynuhu waxay ku hawlantahay oo ay hawsheedu tahay inay yarayso dhaleecaynta iyo takoorida dadka qaba cudurka hivka. Iyadoo Hay’adda caafimaadka dadweynu aanay dhaafaynin shaqadeeda waxay xilliyada dayrta iyo jiilaalka 2015-ka fulinaysa dadaalo warbixino ah oo ku saabsan cudurka hivka ee wadanka Iswiidhan maanta.
Infekshanka hiv, ama cudurka la dhaho hiv, waxaa sababo fiirus oo hiv waxaa la soo gaabiyay magaca (humant immunbristvirus). Hiv waxa la kala qaadi karaa markii galmo la suubiyo. Fiiruska waxa xitaa la qaadi karaa hadii aad suubiso galmada afka aan difaac leheen, oo qaas ahaan shahwada afkaada taabato iyo gudaha afka uu dhaawacan yahay. Adiga hadii aad isticmaasho daraago oo qofkale cirbada la qeybsato, dhiiga baa lagu kala qaadaa, oo fiiruska dhiiga buu la socdaa.
Bilaawga waxbo kama dareemeysid haddii lagugu daartay hiv. Dadka qaarkood waxa xannuunto luqunta, qandho, qanjirada oo bararo ama jirka oo wax uga soo baxo. Astaamaha waxa isku arki hal ilaa afar isbuuc laga soo bilaabo waqtigii infekshanka kugu dhacay. Waxa sidaas daraadeed loogu jeera infekshanka koowaad. Astaamaha waa sidii hergab camal oo dhowr isbuuc kadib waa ka fiicnaan. Laakin infekshanka jirkaada buu kasii shaqeynayaa oo wuxu dili difaaca jirka.
Halista inaa qofkale ku daaran kartid waxey badan tahay bilooyinka koowad markuu infekshanka kugu cusub yahay. Tirada fiiruska aad bey u badan tahay intuu difaaca jirka bilaabin inuu iska celiyo fiiruska, waa haddii aad isku aragtid ama aadan isku arkin astaamaha.
Hiv la iskama talaali-karo oo ma lahan daawo looga fiicnaado. Laakin waxa maanta la helaa daawooyin cudurka faafidiisa joojinaayo isla markaana yareynaya difaaca jirka inuu burburo, waa haddii waqti fiican daawooyinka lagugu bilaabo. Sidaas baa lagu joojinkara inuu isku badalo cudurka difaaca jirka (AIDS, oo ingiris ahaan Acquired Immune Deficiency Syndrome). Haddii aad hesho daawooyin fiican waxaa yaraanaayo halista faafinta cudurka, maadaama inta fiirus oo dhiiga ku jirto iyo dhacaamada kale oo jirka aad u yaraanaayo. Laakin waa in markaas aadan qabin infekshanada kale oo galmada ku faafo. Waa inaa sidaas daraadeed markasto aad galmo suubineysid isticmaashaa bacda (kondom), sidaa u yareysid halista faafinta cudurka iyo cudurada kale iskaga difaacdid. Maadaama daaweeynta eysa eheen mid aad ku reysaneysid waa inaa nolosha oo dhan aad isticmaashaa.
Dhammaan dumarka uurka leh waa laga baaraa hiv, sidii waqti hore daawooyin loogu bilaabikaro, inta ey uurka leeyihiin iyo si looga taxadaro marka la foolinayo, oo markaasna la yareeyo halista ineysan hooyada canuga ku dhaaran hiv. Maanta iswiidhan waa dhif hooyo oo hiv qabto iney canugeeda u gudbiso fiiruska intey uurka leedahay iyo markey fuulaneyso.
Iska baar HIV
Baaritaanka Hiv waa bilaash maadaama cudurka kamid yahay cudurada ku qoran sharciga difaacida cudurada. Adiga markaa iska baareysid hiv waxaa lagaa qaadi dhacaan dhiig iyo haddii aad rabto waxa heysataa fursad aad magacaada kugu qarsoonaado. Hadii aad ka shakisan tahay inaa qabtid hiv waa qasab inaa iska baarto, si aad u heli-karto daawooyin oo lagugu caawiyo iyo kaalmeen iyo aqoon ku saabsan infekshanka, sidaa adiga iskaga ilaalin laheed inaa infekshanka qofkale ku daarato. Inuu qofku iska baaro ama iska tijaabiyo waa sida keliya ee lagu oggaankaro heerka cudurka waxyeelada ugaysta unugyada difaaca jirka dadka (hivstatus).
TALOOYIN IYO WARBIXIN XAQIQ AH [PDF]
December 11, 2015 at 15:50
ninyahoow cudurka hepatits B la yiraahdo ka hadla kaas bey qoladaan swedishku HIV oo kale inoga dhigeen, kulaha daawo malahan, cagarshow B waa kii la gubgubi jiray dalka kkkkkkkk somalaay inti qibrad uleh hakaso hadleen AMA la tacaaleysa,
walaalayaal ka hadla bal cudurka ninkaas sheegay oo ah cagaarshow b raacsiiya kaasna
December 14, 2015 at 05:47